Mapaki emvura akanakisa muUSA | Kufamba Nhau
Mapaki emvura akanakisa muUSA
Maria Jose Roldan | | America, Kufarira
Kana paine chimwe chinhu chinoratidzira United States munguva yekupisa, ndiwo mapaki epamoyo, ane akawanda uye emhando yepamusoro, asi sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, ine mamwe mapaki emusoro ari iwo anonyanya kushanyirwa pasirese . Aya mapaki emvura muUSA anogona kushanyirwa panguva dzese dzegore sezvo vaine hunyanzvi masevhisi ekudzivirira kutonhora.
Asi kana kupisa kwarova, hapana chinhu chiri nani uye chinozorodza kupfuura kushambira mudziva. Kunyangwe bhavha riri dziva rinonyaradza chaizvo, pazviitiko zvakawanda vanhu vari kutsvagawo manzwiro. Kana iwe uri kuenda parwendo kuenda kuUnited States uye uchida kurova kupisa uyezve uine nguva yakanaka, saka haugone kupotsa iyi runyorwa rweakanakisa mapaki emvura muUSA. Iwe unenge uine nguva huru uyezve kunakidzwa sekunge iwe waive mwana zvakare. Senge sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, mapaki emvura anopa zvinomisa-zvinomisa pamoyo uye zvakare zvinopa kunakidzwa kwemhuri. Kubva pamvura roller machira kusvika kumasiraidhi emvura, haugone kupotsa chero emakona ayo.
Areka yaNoa kana Noa Areka
Iyi paki yemvura iri muWisconsin Dells uye ndiyo paki yemvura yakakura kwazvo murudzi, inonzi Areka yaNoa nekuda kwechikonzero ichi uye inorarama zvinoenderana nezita rayo nenhamba huru yemvura inotora mweya wako nekukurumidza paunopinda. nepasuo. Akaunti isina kana chinhu chakaderera pane Masiraidhi makumi mashanu neshanu, madziva maviri emasaisai uye simulator yefurafura.
Inopawo zviitiko zvemhuri yese, asi kana iwe uri anofarira kutsvaga iwe unogona kuenda kumitambo yayo yakanyanyisa, kusanganisira muswe wechinyavada unotumira vashanyi pasi pasiraidhi iyo ingangoita yakatwasuka mune yakatenderera chiuno. Iwe unogona zvakare kupfuura kuburikidza neBlack Anaconda, iyo yakaita semvura roller coaster uye ndiyo inonakidza kwazvo muAmerica.
Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana futi une maresitorendi makuru ekumisazve mabhatiri ako uye kugona kudya zvekudya zvemuno senge chizi rakadzivirirwa kana kuwana michero yayo inoshamisa uye isinga gadzirisike. Pasina kupokana, iyi paki yemvura ndeimwe yeinokurudzirwa kushanya.
Iyi paki yemvura iri muKansas City uye iwe unozoshamiswa nemasiraidhi ayo akakwirira. Iye ane imwe yakanyanya inonzi Verruckt, inova ndiyo yakanyanya kutsvedza pasirese uye inotora mweya wako usati wasvetuka pasi payo. Iyo zvakare ine akati wandei masiraidhi uko vashanyi vayo vanogona kusvetuka panguva imwe chete vanosvika pakumhanya kukuru.
Asi kana usiri wepakareba uye uchisarudza kugara pamwero wegungwa, paki yemvura iyi zvakare inokupa inonakidza nzizi dzemvura kuti unakirwe nemvura. Iwe unogona zvakare kunakidzwa nemafungu sekunge iwe uri mugungwa rakaomarara uye kunyange kusvetukira pasi canyon kana kunakirwa nepaki huru.
Uye zvakare, kana izvo zvaive zvisina kukwana, unogona kutsvaga bhawa mudziva kuti uwane mukana wekuzorora mumvura inopisa. uchinakidzwa nechinwiwa kuti chikubatsire kuchinjisa mabhatiri ako usati waenderera mberi neruzivo rwako mupaki yemvura iyi.
Nyika yemvura o Mvura nyika
Iyi paki yemvura iri muDenver, ine padyo ne Makumi mana emvura anokwezva uye Zuva reMvura reNyika vanoita mutambo mukuru kurangarira kukosha kwemvura. Iyo Mile High Flyer inoshamisa mvura roller roller uye ndiyo imwe yepaki inokwezva nyeredzi nekumhanyisa uye kusimba kwayo.
Dutu iri rakasarudzika pfuti pane imwe raft kukwira uko vatyairi vanodzika chubhu murima uko dutu guru rinoitwazve. Vashanyi vanowanzoifarira zvakanyanya nekuti mabhanan'ana makuru, kupenya kwechiedza, mvura inodzokororwa uye zvese izvi zvinoita kuti vashanyi vanetseke uye vavhiringidzike.
Kana iwe uchifarira kumhanyisa, saka iwe haugone kudzivisa kupfuura kuburikidza neTurbo Racer iyo yauchazofanira kuwana kana iwe uchipinda mupaki yemvura uye wotanga kutsvaga zvese zvainazvo kwauri.
Chena Mvura paki
Chena Mvura Paki unogona kuiwana mukati Branson, . Iyi paki yemvura idiki pane mamwe mapaki eaya maitiro senge ataurwa pamusoro, asi haizokusiye usina hanya nezvese zvayinogona kupa. Mvura yaro chena inobhadharisa saizi yayo uye zvakare ine zvakarongeka chaizvo zvinokwezva, uye chinhu chakanakisa ... ndechekuti ine zviitwa zvemhuri yese, zvakare nezvevadiki.
Ine slide inonzi KaPau iyo ine zasi rine donhwe remakumi manomwe emadhigirii uye nekumonyoroka uko kuchabvisa hiccups yako kure. Asi ivo zvakare vane zvinokwezva zvemazera ese, saka iwe unogona zvakare kunakidzwa, semuenzaniso, Splashaway Cay ine magiza uye vanopfura emvura izvo zvinokubatsira iwe kunakidzwa yega yega yemakona ayo. Asi pane chimwe chinhu chinowanzo daidza vashanyi zvakanyanya kuti vaende kupaki yemvura pane kuenda kune imwe, uye ndiyo nguva yacho. Pakati pemwedzi waChikunguru naAugust, paki yemvura yekuvhiya yakavhurwa kusvika gumi husiku kubva China kusvika Mugovera.
Mvura Nyika USA
Iyi paki yekuvaraidza iri muWilliamsburg, Virginia uye ndiyo imwe yemapaki epamoyo akanakisa aunogona kuwana nhasi. Izvo zvinokutendera iwe kunakidzwa neruzivo rwekusarema mune zvimwe zvinokwezva zvakaita sekumisa mijaho pasi pechikomo kuti pakarepo udzokere kune hofori yakatsvedza madziro ayo anotora mweya wako kure. Iwe unogona zvakare kuenda neshamwari nhatu ku Aquazoid iyo yakagadzirirwa vakashinga.
Paki yekuvaraidza ndeyeyevanonyanya kushinga uye iwe unogona kunakidzwa nemidziyo yayo yemvura roller. Zvirokwazvo, ipaki yakanaka kune vanhu vanofarira kunakirwa nemvura uye nezuva. Saka unogona kunakidzwa nekuzorora uchitenderedza zvinokwezva, zviitiko uye zviitiko zvaunokupa. Iwe unogona zvakare kunakidzwa uye kuve chikamu chemaratidziro ehupenyu anoitika panguva dzakasiyana, yakanaka kune vana.
Iye zvino hauna chikonzero, iwe une runyorwa rukuru rwekuti iwe usarudze iyo paki yemvura inokodzera zvakanyanya hunhu hwako kana zvido zvemhuri yako, kuti unakirwe nayo munzira hombe!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Kufarira » Mapaki emvura akanakisa muUSA
Mari yekupinda yePaki akadaro
Paki yekupinda mutengo
Pindura Paki yekupinda mutengo
Iwo mashanu maguta ane mavara kwazvo pasirese
Andy Warhol naLouise Bourgeois kuGuggenheim Museum